iZotope waxay u dabaaldegeysaa Akadeemiyada Dhaqdhaqaaqa Sawirka Dhaqanka iyo Sayniska 'Sayniska iyo injineernimada ee adeegsiga barashada mashiinka + AI ee filimka / duubista istuudiyaha | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » iZotope wuxuu u dabaaldegayaa Akadeemiyada Dhaqdhaqaaqa Sawirka Dhaqanka iyo Sayniska 'Sayniska iyo injineernimada ee adeegsiga barashada mashiinka + AI ee filimka / duubista istuudiyaha
iZotope, hogaamiyaha warshadaha ee tikniyoolajiyada maqalka caqliga, ayaa la aqoonsan yahay Academy of Motion Picture Arts iyo Sciences la a Abaalmarinta cilmiga iyo injineernimada. Abaal marinta abaalmarinta hogaamiyaha cilmibaaraha Alexey Lukin'shaqada on iZotope ee RX nidaamka maqalka oo ay weheliyaan koox ka badan 70 xisaabyahanno, injineero softiweerro ah, nashqadeeyayaasha dhawaaqa, khabiiro wax soo saar iyo kuwa kale.
Marka la eego guulaha soo saara saamayn la hubo ku leh horumarka warshadaha sawirrada dhaqdhaqaaqa, Abaalmarinta Sayniska iyo Injineernimada waxay dejineysaa xaaladda RX inay tahay aaladda heerka warshadaha ee hagaajinta maqalka iyo kor u qaadista soo-saarka filinka casriga ah. Ka faa'iideysiga horumarka tikniyoolajiyadeed ee farsameynta aaladda dhijitaalka ah iyo barashada mashiinka, RX waxay awood u siisay filimaan aan tiradooda la tirin karin iyo barnaamijyo TV-ga ah si loogu soo celiyo maqalkii dhawaa ee dhaawacmay, ee buuqa badnaa. Qalabka caqliga, oo ay ku shaqeeyso barashada mashiinka, ayaa lagu laabay muuqaal muuqaal ah oo macquul ah kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay wax ka beddelaan dhawaqa sidii iyagoo sawir tifaftiraya. Markii ugu horreysay ee la soo saaray 2007, iZotope RX waxay ku soo baxday toddobo nooc oo soo socda si ay u noqdaan kuwa ugu hal-abuurka badan qalabka maqalka iyo hagaajinta.
RX waxay ku biirisay tiro balaadhan oo ah Academy AwardFilms ku guuleysta filimada loogu talagalay Tafatirka Codka iyo Dhaxgalka Dhawaaqa oo ay ka mid yihiin Dhaawaca qoorta, Mad Max, cadho Road, Iyo Bohemian Rhapsody, iyo sidoo kale ku guuleystaha Sawirka ugu Fiican Birdman iyo liis dheer oo aflaamta lacagaha ugu badan soo xareeyaan ay ka mid yihiin Black Panther iyo Rakaabka: Dhamaan. Awoodda RX ee badbaadinta codka dhaawacmay ayaa awood u siiday sii deynta filimkii ugu dambeeyay ee Orson Welles Dhinaca Kale ee Dabaysha iyadoo sidoo kale lagu xallinayo dhibaatooyinka maqalka maalin kasta ee wax soo saarka waaweyn ee casriga ah oo ay ku jiraan "Game of Thrones" iyo "The Walking Dead." Si joogto ah ayey u sharfeen ururada warshadaha sida Cinema Audio Society (5-jeer oo ku guuleystey Farsamada Achievement), RX waxay u bedeshay farshaxanka iyo sayniska codka filimka.
“Sharaf weyn ayey u tahay Alexey iyo kooxda iZotope inay helaan abaalmarintan,” ayaa faallo laga bixiyay Calaamadee Ethier, aasaasaha iyo agaasimaha guud ee iZotope. Shirkad ahaan diiradeena waa inaan taageerno shaqada hal abuurka ah filimada iyadoo laga saarayo caqabadaha farsamo ee soo saarista maqalka, waana ku qanacsanahay aqoonsigan hal-abuurnimadeenna ku aaddan baacsiga. Waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa bulshada xirfadleyda maqalka ah oo na taageeray sannadihii la soo dhaafay. Waa raadintooda heerarka ugu sarreeya ee sheeko-soo-saarka hal abuurka leh taasoo kaliftay shaqadeenna. ”
"Waxay ahayd 18 sano ka hor markii ugu horreysay ee aan soo saaray dhowr fikradood oo farsamo ah oo hadhow noqon doona iZotope RX," ayuu raaciyay Alexey Lukin, Maamulaha DSP Injineerka iZotope. “Isbadalkan oo ah boqol xariiq oo koodh C ++ ah isla markaana loo beddelay qalabka ay ka kooban tahay heerka warshadaha ee qalabka maanta waa suurtagal la’aantood haddii aanu lahayn xidhiidhkeena cajiibka ah ee aanu la leenahay xirfadlayaasha boostada maqalka. Inaan si toos ah uga maqalno iyaga baahiyahooda hal-abuurnimo waxay awood noo siisay oo nagu dhiirrigelisay inaan ka dhigno dariiqooyin aan macquul ahayn oo ku saabsan tafatirka maqalka mid dhab ah. ”
iZotope waxay sidoo kale ku guuleysatay amaan balaaran barnaamijkooda wax soo saarka muusikada, oo ay ku jiraan Ozone hanashada, Neutron isku qasid, iyo Spire nidaamka deegaanka wax lagu duubo, wax soo saarka iyo qalabka iskaashiga. Taageerayaasha aadka u jecel Spire waxaa ka mid ah Pete Townshend, Trey Anastasio, Phoebe Bridgers, Paramore's Hayley Williams iyo kuwa kaloo badan, halka barnaamijka iZotope uu ka caawiyay sameynta diiwaanka Beyonce, Sia, Doja Cat, Shawn Mendes, Kendrick Lamar iyo kuwa kale.
Ku saabsan iZotope:
IZotope, waxaan ku mashquulsan nahay dhawaq weyn. Tiknoolajiyadeena maqalka ah ee caqliga badan waxay ka caawisaa muusikiistayaasha, soo saarayaasha muusikada, iyo injineerada boostada maqalka inay diiradda saaraan xirfadooda halkii ay ka ahaan lahaayeen tiknoolajiyadda ka dambeysa. Waxaan naqshadeynaa barnaamijyo abaalmarin ku guuleystay, qalab dheeri ah, qalabka kombuyuutarrada iyo barnaamijyada moobiilka oo ay ku shaqeyso waxqabadka maqalka ee ugu tayada sarreeya, barashada mashiinka iyo is-dhexgallada dareenka leh.
Previous: Lynette Duensing Waxaa Loogu Magacdaray Ururka Caalamiga ah Midableyda
Next: Sawir qaade Mark Patten BSC wuxuu isku daraa oo lawareegaa muraayadaha 'Cooke lenses' ee waagii kala duwanaa Marksman-ka